Tweak UI အသုံးဝင်ပုံ | Saw San
Tweak UI အသုံးဝင်ပုံ
posted in Software, Technology on August 17, 2010 by sawsan
ဒီ program က window xp မှာတော့မပါတက်ပါဘူး xp vista editing တွေမှာတော့ပါမယ်ထင်တယ်။ ကျနော်သုံးနေတဲ့ Window XP Dark Editing မှာပါတယ်။ Internet ထဲမှာလည်း ရှိပါတယ်။ အသုံးဝင်ပုံတွေထဲက အနည်းအကျင်းပဲဖေါ်ပြသွားပါမယ်။
အပေါ်က ပုံမှာ အနီနဲ့ပြထားတဲ့နေရာမှာ ကွန်ပျုတာမှာရှိတဲ့၊ ဖန်တီးထားတဲ့ shortcut တွေကို shortcut မှန်းမသိအောင် မြှားလေးတွေကို ဖြုတ်တာ ပြင်တာ လုပ်လို့ပါတယ်။ အဲ့မှာ None ကိုရွေးပြီး shortcut တွေကို သငေ်္ကတမြှားလေးတွေကို ဖြုတ်ထားလို့ရပါတယ်။
…………………. ။ …………………
အပေါ်ကပုံမှာတော့ ကွန်ပျုတာမှာ ဘယ်တုန်းက ဘာတွေကြည့်သွားတယ်ဆိုတာ ပြန်ကြည့်တဲ့ recent folder နဲ့ပါတ်သတ်လို့ပြုပြင်တဲ့နေရာပါ။ ဒီလိုပါ Start >> Run box မှာ recent လို့ရိုက်ပြီးကြည့်ရင် မကြာသေးခင်က ဖွင့်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ file တွေ folder တွေကိုက ဘာတွေလည်းဆိုတာ ပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကို မသိစေချင်တဲ့အခါ recent folder ထဲကိုဝင်ဖျတ်တက်ကြပါတယ်။ဲဲ့ဲ့့ ဒါပေသိ registry ထဲကို ဝင်မဖျတ်နိုင်သေးသ၍ သေချာမပျက်သေးပါဘူး။ format ရိုက်ပြီးသားတောင် Data တွေကို ပြန်ဖေါ်လို့ရတာဟုတ်?၊ အခု အပေါ်ကပုံမှာ အနီနဲ့ပြထားတဲ့နေရာ ၂ ခုမှာ uncheck လုပ်ထားရင်တော့ recent မှာဝင်ဖျတ်တာထက် ပိုအထောက်အကူပြုပါတယ်။
…………………………. ။ ……………………………..
အပေါ်က ပုံမှာ အနီနဲ့ပြထားတဲ့နေရာက folder တွေထဲမှာထည့်ထားတဲ့ပုံတွေ data တွေကို Thumbnails နဲ့ဖေါ်ပြပေးနိုင်တဲ့ ပမာဏကို ချိန်ညှိတဲ့နေရာပါ။ ဒီလိုပါ folder တစ်ခုထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ ပုံတွေ data တွေကို folder ထဲမှာ ဘာတွေထည့်ထားတယ်ဆိုတာကို window စနစ်က Thumbnails နဲ့ ဖေါ်ပြပေးပါတယ်။ ဒါပေသိ အဲ့လို folder တွေထဲမှာ data တွေ ၊ ပုံတွေများလာတဲ့အခါ window က မှတ်သားဖေါ်ပြပေးနိုင်တဲ့ ပမာဏထက်ကျော်သွားရင် မဖေါ်ပြပေးနိုင်တော့ပါဘူး။ window default က မှတ်သားနိုင်တဲ့ ပမာဏက ၄၀ဝ ပါ။ အပေါ်က ပုံမှာ အနီနဲ့ပြထားတဲ့ Folder to remember ဆိုတဲ့နေရာမှာ လိုအပ်သလောက်ရိုက်ထည့်ပါ။
အပေါ်ကပုံမှာ ပြထားတဲ့နေရာက Start Menu ထဲက Program list ထဲက program တစ်ခုခြင်းကို ခဏဖျောက်ထား လျော့ထားလို့ရတဲ့နေရာပါ။ ဒီလိုပါ ကိုယ်အသုံးပြုနေတဲ့ program တစ်ခုက တစ်ခြား အသုံးမပြုတက်တဲ့သူတစ်ယောက်ယောက် (or) အသုံးပြုတက်သူတစ်ယောက်ယောက် မသုံးစေချင်ဘူးဆိုရင် အသုံးပြုလို့မလွယ်ကူအောင် အပေါ်က ပုံမှာ အနီနဲ့ပြထားတဲ့နေရာမှာ uncheck (or) check လုပ်ပြီး ခဏဖျောက်တာဖေါ်တာကို ပြုပြင်လို့ရပါတယ်။
အပေါ်ကပုံမှာပြထားတဲ့နေရာကတော့ ကျနော်အတော်သဘောကျပါတယ်။ CD/DVD and removable drives (memory stick) တွေ ကွန်ပျုတာမှာ တပ်တဲ့အခါ အရေးကြီးနဲ့နေရာတစ်ခု ထိန်းချုပ်လို့ရတာပါ။ ဒီလိုပါ ကွန်ပျုတာမှာ virus ကူးစပ်နိုင်တဲ့ နေရာတွေဖြစ်တဲ့ ဒီ CD/DVD and removable drives (memory stick) တွေ တပ်တဲ့အခါ ပထမဆုံးအလုပ်လုပ်တာ autorun ပါ
အဲ့ဒီ autorun file က support လုပ်ပေးမှုနဲ့ virus program တွေက ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ ဒီနေရာမှာ
အနီနဲ့ပြထားတဲ့နေရာ ၂ ခုကို uncheck လုပ်ထားသင့်ပါတယ်လို့ အကြံပြုပါတယ်။ CD/DVD and removable drives (memory stick) တပ်လိုက်တာနဲ့ အစစ်အဆေးမရှိ အလွယ်တကူ ဖိုင်ဖွင့်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ check လုပ်ပေါ့ဗျာ။ autorun ဖိုင်ရေးပြီး အသုံးချပုံနဲ့ autorun ရဲ့ ကြောက်ဖို့ကောင်းပုံကို နောက်မှ ရေးပေးဦးမယ်။
……………………………….. ။ ……………………………………
နောက်ထပ် ဒီ program ထဲမှာ လိုသလို အသုံးချလို့ရတဲ့နေရာတွေကျန်ပါသေးတယ်။ ကိုယ်ပါနဲ့ကိုပဲ ကျန်တာတွေကို လေ့လာစမ်းသပ်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။
Download here (file size is 249 KB) >> DownLoad
← Gmail အကောင့် ၂ ခုကို Browser တစ်ခုထဲမှာ တပြိုင်တည်းသုံးဖို့
IF ‘အကယ်၍’ →